I-Marbella Penthouse ene-pool-entsha neyangoku - I-Airbnb
I-Marbella Penthouse ene-pool-entsha neyangoku
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJonathan And Jana
UJonathan And Jana yi-Superhost
Indlu entsha yomphelo kuphuhliso lwamasango amagumbi angama-24 kuphela, abekwe ngaphezulu kwemigangatho emibini enophahla olukhulu lwabucala olunophahla lwelanga lokutshisa imini yonke kunye nedama elizolileyo ekupheleni kwegadi. Imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka elunxwemeni kunye nemizuzu esi-7 ukuya kwidolophu yaseSan Pedro ngeyona ndawo ikufutshane yokutyela imizuzwana eli-15 kude. Puerto Banus 3 imizuzu ngeteksi. Ibhedi kunye nesitulo esiphezulu siyafumaneka
Le ndlu intle, yanamhlanje ikumgangatho ophezulu woluntu olutsha olunamasango eSan Pedro, idolophu encinci ekufutshane nePuerto Banus. Ikwindawo entle kakhulu kuzo zombini ulwandle kunye nedolophu kwaye inedama labahlali elizolile kakhulu.
Ukusuka kwigumbi lokuhlala unokufikelela kuphahla lwabucala olubekwe ngeelounge ezimbini zelanga kunye neesofa. Unemibono yolwandle emangalisayo ukusuka apha kwaye ube nelanga imini yonke.
Kukuhambo lwemizuzu emihlanu ukuya elunxwemeni kunye nokuhamba imizuzu esixhenxe ukuya kwidolophu yaseSan Pedro. Iiteksi zihamba imizuzu emithandathu (okanye zinokuodolwa ngefowuni ukuba zikulande ngaphandle (kukho ikhadi kwiflethi) kwaye iPuerto Banus yimizuzu nje embalwa ngeteksi, ngokwesiqhelo ngaphantsi kwee-euro ezili-10. ISan Pedro AYIYOndawo yepati. kodwa ukufutshane kakhulu ePuerto Banus leyo!
Ukuba unabantwana, uya kuvuya ukwazi ukuba uphuhliso lunesango kwaye sinesihlalo esinye esiphakamileyo, ibhedi kunye nedama lokubheqa labantwana abancinci.
Njengoko eli ilikhaya lethu leeholide sifuna kuphela iindwendwe eziya kuhlonipha ukuba le yindlu entsha kraca - yonke into ukusuka kwiibhedi ukuya kwi-cutlery intsha.
Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ukuba utyele kulo kwaye ungonwabela isidlo kwiitafile ezihlala abantu abasi-8 nokuba kumagumbi okuhlala okanye kwigumbi eliphezulu elikwindawo yokutyela elangeni. Kukho ininzi yefenitshala yasehlotyeni kwindawo yelanga (kunye neendawo zokuhlala ezimbini zelanga) kunye neparasol enkulu yokugcina ilanga lingangeni. Njengoko iflethi ijonge emazantsi ufumana ilanga imini yonke.
Ukhuseleko lugqwesile ngepaki yemoto engaphantsi komhlaba, isitshixo sesango elikhuselweyo esitratweni kunye neengcango zokhuseleko oluphezulu kwigumbi lokuhlala.
Ukusuka phambi kweflethi unokubona ulwandle kwaye ukuya ngasemva, iintaba.
Kukho indawo yokutyela entle ngaphaya kwendlela kwaye imizuzu emihlanu/mithandathu kude kukho iindawo zokutyela ezisixhenxe ezilandelelanayo- zonke zahlukile kwaye zonke zikumgangatho olungileyo.
Idolophu yemveli kakhulu kwaye ayirhwebi kakhulu into ethetha ukuba amaxabiso afanelekile - ii-euro ezintathu ngeglasi yewayini! ISan Pedro yidolophu eqhelekileyo yaseSpain eneebhari ezininzi kunye neekhefi. Ukuba ufuna into exakekileyo, iPuerto Banus yimizuzu emithathu/i-euro ezisixhenxe kude kwaye idolophu yaseMarbella yimizuzu eli-12 kunye namashumi amabini eeuro kude. Siyavuya ukucebisa iindawo zokutyela zasekuhlaleni.
Siyathemba ukuba uyakukonwabela ukuhlala kwakho nathi.
Siku 350m ukusuka elunxwemeni kwaye unokulubona ulwandle kwibalcony.
Idolophu yaseSan Pedro yimizuzu esixhenxe yokuhamba kwaye izele ziindawo zokutyela kunye neekhefi.
UMarbella yimizuzu eli-12 eteksini kunye nePuerto Banus imizuzu nje emithathu
Umbuki zindwendwe ngu- Jonathan And Jana
Ndifumaneka imini yonke nge-app ka-Airbnb kwaye inenekazi lethu elingumSpanish, uJulia, liza kudibana nawe lize likunike izitshixo. Ndidla ngokuphendula ngoko nangoko.
Inombolo yomthetho: CTC-2018156089
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$631